केन्द्रमा चर्चा कमाउने मोफसलका गायक - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कृष्ण आचार्य १७ चैत
उनले संगीत क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो समय बिताए। दुई दर्जन गीतमा आफ्नो आवाज भरे। गीत चल्ने आशमा आफ्नै लगानी समेत लगाए। तर, कुनै गीत हिट भएनन्। बरु उल्टै ब्यक्तिगत २० लाखभन्दा धेरै रकम स्वाहा भयो।
उनी अर्थात् गायक सन्दीप न्यौपाने।
उनको ‘पुलिसवाला’ बोलको गीत युट्युबमा ९ लाखभन्दा धेरैपटक हेरिएको थियो। उनले गाएका कतिपय गीतले राम्रै चर्चा कमाए। तर उनी भने चर्चामा आएनन्।
हुन त, कलाकारले आफ्नो कर्म गर्ने हो, चर्चाका लागि काम गर्ने होइन। तर, सँगसँगै सत्य कुरा के पनि हो भने कलाकारलाई उसका गीतमार्फत् धेरैभन्दा धेरै स्रोता–दर्शकले चिनेनन् भने जीवन नै खल्लो भइदिन्छ।
यसको एउटा कारण सन्दीपको मोफसल बसाई पनि हुन सक्छ। उनी हिट हुन या चर्चामा आउन काठमाडौं बसाई सरेनन्। ‘जे गर्छु, मोफसलबाटै गर्छु’ भनेर बसिरहे।
भनिन्छ नि, १२ वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्कन्छ। गायक न्यौपानेको जीवनसँग यो उखान मेल खायो। औपचारिक रुपमा गीत गाएर हिँड्न थालेको १२ वर्षपछि उनको गीत हिट हुन पुगेको छ। अर्थात्, ‘सय करोड क्लब’ मा प्रवेश गर्ने तरखरमा छ।
त्यो गीत हो, ‘लालुमै’ बोलको गीत। जुन पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ।
पूजामा गीतदेखि लाइभ दोहोरीसम्म
सन्दीपमा कलाप्रति सानैदेखि लगाव थियो। स्कूल पढ्दा उनी एकान्तमा गीत गुनगुनाउँथे। रेडियो नेपालमा कुनै गीत आउँदा स्वरमा स्वर मिलाउँदै कम्मर मर्काउँथे। तर, स्कुलमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन लजाउँथे।
यही लजालु स्वभावका कारण कला र गला दुवै भएका उनी स्कुले जीवनमा गुमनाम रहे।
उनी गाउँघर (दाङको लमही आसपास) मा हुने पूजाआजामा गएर दोहरी गीत गाउँथे। यही कारण २०५८ ताकादेखि स्थानीयस्तरमा उनको ‘क्रेज’ यसरी बढ्न थाल्यो कि, कसैको घरमा पूजाआजा हुनासाथ सन्दीपलाई बोलाइन्थ्यो।
२०६० तिर उनको गीत यादव योगी र राजु क्षेत्रीले सुने। यी दुबैले दाङको गीत–संगीत क्षेत्रमा राम्रो चर्चा पाएका थिए। उनीहरुलाई सन्दीपको स्वर मनप¥यो। त्यसैले, उनीहरुले ‘राप्ती कला मन्दिर’ मा गीत गाउने अवसर मिलाइदिए।
यसरी उनले लाइभ दोहोरी गाउने मौका पाए।
२०६२ मा अरनिको मैदान तुलसीपुरमा दोहोरी प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। जीवनमै पहिलोपटक रोल्पाको प्रतिनिधित्व गर्दै सन्दीप कार्यक्रममा भाग लिन पुगे।
दाङको मान्छेले रोल्पाबाट कसरी भाग लिए त? सन्दीप भन्छन्, ‘दाङबाट म भन्दा राम्रो गाउने अग्रजहरु थिए। त्यसैले, मैले स्थान पाइन। रोल्पाबाट मान्छेको अभाव थियो। त्यही कारण रोल्पाको प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिने अवसर पाएँ।’
पहिलो औपचारिक प्रतियोगितामै उनी तृतीय हुन सफल भए। त्यसपछि उनको मनमा दोहोरीको बिउ उम्रियो।
अर्थात्, सन्दीपले अठोट कसे, ‘अब म दोहरीलाई नै आफ्नो सपना बनाउँछु।’
२०६२ देखि ०६८ सम्म सन्दीप दोहा्री गाएरै हिँडे। मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा गीत गाउँदै हिँड्दा उनलाई आफ्नो सपना पुरा भइरहेको भान हुन थाल्यो। किनपनि भने, त्यसैक्रममा उनले काठमाडौँमा भएको ‘टुबोर्ग राष्ट्रिय दोहरी गीत प्रतियोगिता’ मा दोस्रो भएर एक लाख राशीको पुरस्कार हात पारिसकेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएर एक लाख पाउनु चानचुने कुरा थिएन।
विस्तारै सन्दीपमा एल्बम निकाल्ने भूत पस्यो। ‘एउटा एल्बम ननिकाल्दासम्म गायक भइँदैन भन्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि होला, जसरी हुन्छ आफ्नै स्वरमा गीत रेकर्ड गराउनु थियो।’
त्यति नै बेला चर्चामा रहेका रचनाकार एवं संगीतकार करन न्यौपानेसँग सन्दीपले एउटा गीत गाउने गर्ने मौका पाए, ‘दिल मेरो चोरी लग्यो पुलिसवालाले।’
गीतले देशब्यापी चर्चा त पाएन तर, पश्चिम क्षेत्रमा सन्दीपलाई धेरैमाझ चिनायो।
त्यसो त पहिलोपटक स्टेज चढ्दा तृतीय र पहिलो एल्बम निकाल्दा हिट भएका सन्दीप त्यसपछि भने खासै चर्चामा रहेनन्। ‘पहिलो एल्बमपछि पनि निरन्तर गीतहरु गरेँ तर, कुनै पनि गीत राम्रोसँग चलेनन्’ सन्दीप भन्छन्, ‘आफूले पनि लगानी लगाएका गीत चल्दै नचलेपछि त मलाई ‘फ्रष्टेसन’ हुन थाल्यो। ‘डिप्रेशन’ मा जान्छु कि भनेजस्तो अवस्था पनि आयो।’
त्यतिबेला जागिर पनि गर्थे सन्दीप। त्यसैले, उनलाई जीवन चलाउन अलिक सहज थियो। तर, जागिरबाट कमाएको पैसा गीतमा खन्याएर त्यसको प्रतिफल नपाउँदा पीडा हुँदो रहेछ। उनले यो पीडा भोगे। ‘डिप्रेशन’ मा पुग्ने अवस्थाको एउटा कारण यो पनि थियो।
सन्दीप संगीत क्षेत्रमा टिकिराख्नुको पछाडि उनमा रहेको एउटा विचार थियो, ‘मानव अपूर्ण हुन्छ र उसलाई पूर्ण हुन लामो समय, ठूलो मेहनत, संघर्ष र धैर्यता चाहिन्छ।’
यति थाहा हुँदाहुँदै पनि उनमा धैर्यताको बाँध फुट्दै थियो।
सन्दीपको स्वरसँगै अभिनय कला पनि गज्जबको छ। उनले गायका अधिकांश गीतमा उनी आफै मोडलिङ गर्छन्। सानैदेखि नाच्न सिपालु सन्दीप आफ्नो एल्बममा आफै अभिनय गर्दा समय र स्रोतको बचत हुनुका साथै आफूले चाहेजस्तो दिन सकिने बताउँछन्।
‘मलाई अभिनयसम्बन्धी ज्ञान र रुची दुबै छ’ सन्दीप भन्छन्, ‘त्यसैले पनि आफ्नो म्युजिक भिडियोमा मोडलको रुपमा म देखिएको हुँ।’
‘छायाछवि’ ले २०७४ मा आयोजना गरेको ‘तीज म्युजिक अवार्ड’ मा ‘सर्वोकृष्ट तीज गीत भिडियो मोडल पुरुष’को अवार्ड पाएका थिए सन्दीपले। यसरी उनले आफ्नो गायन र अभिनयलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै लगे।
तर, उनको मुख्य पेशा गायन नै हो। ‘सायद दुईमा एक रोज्न लगाइयो भने म गायन नै रोज्छु’ मुस्कुराउँदै बताउँछन् सन्दीप, ‘आफूले लगानी गरेको गीतमा पैसा बचाउन पनि हो क्या मोडल बनेको।’
जति गीत गरे पनि नचलेपछि सन्दीप बिरक्तिएका थिए। तर, उनलाई यो क्षेत्र चटक्कै छाड्न मन भने थिएन। ‘एक पटक अन्तिम प्रयास गर्छु’ भन्ने थियो। यसैक्रममा सर्जक शिव हमालको शब्द रहेको ‘लालुमै’ गीतमा सन्दीपले काम गर्ने अवसर पाए।
सन्दीपलाई स्वरमा चर्चित गायिका विष्णु माझीले साथ दिइन्। गीत रातारात हिट भयो। गीतसँगै सन्दीप पनि हिट भए।
सन्दीपको आफ्नै अभिनय रहेको गीतले चौतर्फी चर्चा कमाइरहेको छ। विदेशबाट कार्यक्रमका लागि फोन आइरहेका छन्। नयाँ गीतका लागि अफर त कति कति!
‘मलाई अब यो गीतले केही गर्छ जस्तो लाग्छ’ सन्दिप भन्छन्, ‘मैले सुखमा नमात्तिएर र दुःखमा नआत्तिएर संगीत क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुको प्रतिफल होजस्तो लाग्छ।’
सन्दीपले ‘यो गीत पनि नचले म कहिल्यै गीत गाउँदिन’ भनेर कसम खाइसकेका थिए। किनकी, यस गीतमा उनको ५ लाख लगानीसमेत थियो। तर, अवस्था त्यस्तो आएन। गीत युट्युबमार्फत् नै फाइदामा पुगिसक्यो।
मोफसलमा बसेर केन्द्रमा हिट
सन्दीप मोफसल (दाङ) मा बस्छन्। मोफसलमा बसेर पनि उनले संगीत क्षेत्रमा आफूलाई यहाँसम्म पु¥याउनु चानचुने कुरा पक्कै होइन। केन्द्रमा बसेर लामो समयदेखि संगीत क्षेत्रमा लागेकाहरुले समेत सफलताको स्वाद चाख्न नपाइरहेका बेला सन्दीप मोफसलबाट केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेरै चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्।
‘काम गर्ने मान्छेलाई काठमाडौँ नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा बसेर जसले जे जति गरेको छ, मोफसलबाट त्यति त मैले पनि गरेकै छु।’
तर, उनी आफू काठमाडौँमा भइदिएको भए हिट हुन यति समय लाग्ने थिएन कि भन्नेमा भने सहमत छन्। किनकी मोफसलमा भएका कारण मिडियाको आँखाबाट उनी सधै टाढा नै रहे।
मोफसलमा बसेर केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सन्दीपलाई मज्जा आउँछ। धेरैले उनलाई काठमाडौँमै बस्न आग्रह नगरेका पनि होइनन्। तर, उनले आफ्नो हठ छाडेनन्।
र, आज त्यही हठले उनलाई मोफसलमा बसेर केन्द्र हल्लाउने गायक बनाइदिएको छ, यस्तो सौभाग्य जो कसैले सित्तिमित्ति पाउँदैन।
प्रकाशित १७ चैत २०७५, आइतबार | 2019-03-31 17:48:59